လူမှုမီဒီယာနှင့်Femတ္တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန်များ Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 18, 2012 ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 18, 2012 Douglas Karr
သင်၏မြှင့်တင်ရေးကို Facebook တွင်ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာတစ်ခုရှိခြင်း ဣတ္တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန် ဖြစ်ကောင်းပြီးသားစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ထွက်လာသောစာမျက်နှာပေါ်တွင်လိမ္မာပါးနပ်စွာရက်စက်သောမှတ်ချက်တစ်ခုထည့်ခြင်းသည်အနည်းငယ်ရှက်စရာဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီမှာပါ ဆင်ဆာ Bodyform ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာရှိရစ်ချတ်မှမှတ်ချက် -
မင်္ဂလာပါ၊ လူတစ်ယောက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဘာကြောင့်ဒီနှစ်များတစ်လျှောက်လိမ်ပြောခဲ့တာလဲဟုမေးရမည်။ ကလေးဘဝတုန်းကဒီအမျိုးသမီးအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်များစွာသောအရာတွေကိုပျော်မွေ့နိုင်ခဲ့သည့်ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်အချိန်တွင်သင်၏ကြော်ငြာများကိုစိတ် ၀ င်စားစွာကြည့်ခဲ့သည်၊ ကျွန်တော်မနာလိုမှုအနည်းငယ်ခံစားခဲ့ရသည်။ ဆိုလိုတာကစက်ဘီးစီးခြင်း၊ rollercoasters၊ ကခုန်ခြင်း၊ လေထီးစီးခြင်း၊ ဤဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းစရာအချိန်နှင့် 'အပြာရောင်ရေ' နှင့်အတောင်ပံများကိုအဘယ်ကြောင့်မရရှိနိုင်သနည်း !! ... ထိုအခါငါရည်းစားရတယ်, အရမ်းပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်နှင့်လ၏ဤပျော်စရာစွန့်စားမှုအချိန်ဖြစ်ပျက်ဖို့စောင့်ဆိုင်းလို့မရဘူး ... ..You လိမ် !! အဘယ်သူမျှမဝမ်းမြောက်သောစိတ်မရှိ, အစွန်းရောက်အားကစားမရှိ, အတောင်ပံကျော်ဖြာရေပြာမရှိခြင်းနှင့်တုန်လှုပ်စေသောတေးသံအဘယ်သူမျှမမျှ။ ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးကချစ်ခြင်း၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့သော၊ ပုံမှန်အသားအရောင်ရှိသောအမျိုးသမီးငယ်မှအဆိပ်အတောက်ပိုမိုများပြားလာပြီး ၃၆၀ ဒီဂရီခေါင်းအလှည့်အပြောင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအမျိုးသမီးငယ်မှအော်မြည်နေသည့်အော်ဟစ်သံကိုဆန့်ကျင်ခဲ့ရသည်။ ငါ့ကိုလှည့်စားတဲ့ bodyform အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊
ရစ်ချတ်ကိုယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးတုံ့ပြန်ခြင်းနှင့်ဖြစ်ရပ်ကအလျင်အမြန်ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်မည့်အစား Bodyform ကအခြားချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ချစ်တယ်
မိုဘိုင်း application developer များအတွက် Countly Analytics
18:2012 pm တွင်အောက်တိုဘာ 2, 10
20:2012 pm တွင်အောက်တိုဘာ 9, 07
@hisocial မှတ်ချက်ကိုသူတို့ censor မလုပ်ခဲ့ပါ။ glory သူတို့ကအရာအားလုံးကိုဘုန်းအသရေတစ်ခုလုံးမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့တယ်။ စကားလုံးတစ်လုံးသည်ဤဘလော့ဂ်အတွက်အငြင်းပွားဖွယ်အနည်းငယ်သာဖြစ်သည်။